18+ Kufunga Kwevakadzi Vasina Njere - Hanzi Ndoda Kunyima Murume Bonde Nokuti Anditsamwisa 18+ Kufunga Kwevakadzi Vasina Njere - Hanzi Ndoda Kunyima Murume Bonde Nokuti Anditsamwisa
18+ Kufunga Kwevakadzi Vasina Njere - Hanzi Ndoda Kunyima Murume Bonde Nokuti Anditsamwisa
Kana muri mumba menyu murume asina kukuhurira, haumbofaniri kumurambira chero zvodii.
Ipapo pakutsamwa ndipo paunotomuudza kuti uya uite ndivate. Asi kuvhura unotovhura chete. Akada kuramba iwe wotomuudza kuti ava kutowedzera kukutsamwisa. Vanhu vakaroorana havafi vakasvika pakunyimana vachiti nokuti vapopotedzana.
Kana wakatsamwa usataura naye, usamutarisa, saka fongora aite ari shure uko iwe zii zvako asi shanda murume agute, asawana chimwe chinhu chaanoti wakaita chingahi chakaipa mumba. Kana iwe wati iye akanganisa iwe chitaridza kuti haukanganisi.
Hazvifaniri kuti mukadzi kana murume arambe kuvata noumwe wake musina kurambana. Kana kurhizena kwese kwapera, musisahwisisani zvachose, chinhu chinofanira kuramba chiripo kurhojana. Uchaona futi kuti ukavata nomurume wakatsamwa, unopedzera shungu pachikapa, zvadaro mapedza unokwanisa kuhwa shungu zvokutochemedza nazvo, iri ngari yokuti unofunga kuti uyu murume wangu wandinoda asi iye anondishungurudza. Zvadaro uchaona murume oitawo sokuti munhu kwauri. Munokwanisa kuzotaudzana agokumbira regerero, mozovata nyaya yapera, kuseni moisanazve nomufaro. Kunyimana bodo, zvachose ... bodo!!
Adopted From - Amai Chibwe [maichibwe.blogspot.com]